Rest of Myanmar | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား စာရင်းကိုင် ၊ စာရင်းစစ် နှင့် ငွေကြေးအလုပ်အကိုင်များ | MyJobs
Rest of Myanmar ရှိ မှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား စာရင်းကိုင် ၊ စာရင်းစစ် နှင့် ငွေကြေးအလုပ်အကိုင်များ
Assistant Accountant (Pyay)
စာရင်းကိုင် ၊ စာရင်းစစ် နှင့် ငွေကြေးအလုပ်အကိုင်များ 1 ပတ်
Risk and Compliance Officer (Magway)
- Must have at least (3) years working experiences in Microfinance Field. - Able to work in Magway.
* To take tasks and responsibilities dutifully assigned by Sr.Manager in accordance with the nee ...
Branch Manager (Meikhtila)
- Must have minimum (4) years working experience in Micro-finance. - Must have (1) year in Management experience. - Able to work in Meikhtila.
- Must have minimum (4) years working experience in Micro-finance. - Must have (1) year in Man ...
Head of Internal Audit Department (Naypyitaw)
Senior Internal Auditor (Naypyitaw)
Experiences • Minimum2years of experience in complaints handling, data collection, community ...
We are currently looking for an experienced, and thorough chief accountant to join our rapidly g ...
ရှိ ထိပ်တန်းကုမ္မဏီများမှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား စာရင်းကိုင် ၊ စာရင်းစစ် နှင့် ငွေကြေးအလုပ်အကိုင်များ ကိုရှာဖွေလိုက်ပါ။ အွန်လိုင်းမှအလွယ်တကူလျှောက်ထားပြီး အလုပ်အသိပေးချက်များအတွက် စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။